အပိုင်း: ဆေးဝါး 2022 ဇူလိုင်လ
ဆေးဝါး 2022, ဇူလိုင်လ
ဒစ်ဂျစ်တယ် PCR အလုပ်လုပ်ပုံ (2022)
ဒစ်ဂျစ်တယ် polymerase တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးရာတွင် သိရန်များစွာရှိသည်။
Pot ၏တရားဝင်မှု တိုးလာသော်လည်း၊ လက်ခံမှုသည် မည်သည့်အရာမဆို တသမတ်တည်းဖြစ်သည်။ (2022)
ပြည်နယ် 15 ခုတွင် အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း အချို့နေရာများတွင်မူ နှေးကွေးနေဆဲဖြစ်သည်။
Opioids မှ အလွန်အကျွံ ပမာဏ ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ Meth မှ တက်လာသည်။ (2022)
JAMA Psychiatry မှထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် စိတ်ကြွဆေးအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးမှုသည် 2011-2018 ခုနှစ်မှ 8 နှစ်တာကာလအတွင်း သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
FDA က Glucagon အတွက် ပထမဆုံး generic ကို ထောက်ခံသည်။ (2022)
ယခုအချိန်အထိ သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်ပမာဏသည် အန္တရာယ်ရှိသောအဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားသော ဆီးချိုရောဂါရှိသူများသည် ဂလူဂွန်အတွက် အမှတ်တံဆိပ်အမည်စျေးနှုန်းများကို ပေးဆောင်ရန်မှတပါး ရွေးချယ်စရာမရှိပေ။
FDA က မသန့်ရှင်းသော ED၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော ထုတ်ကုန်များကို မဝယ်ရန် သတိပေးထားသည်။ (2022)
FDA သည် အွန်လိုင်းတွင် စျေးဝယ်ထွက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော ထုတ်ကုန်များတွင် အညွှန်းတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ရောနှောခြင်းသည် ပြန်လည် ခေါ်ယူမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ (2022)
ဆေးထုပ်ပိုးတဲ့စက်ရုံမှာ အမှားတစ်ခုက Viagra နဲ့ စိတ်ကျရောဂါကို သက်သာစေတယ်။ လိင်အင်္ဂါချို့ယွင်းခြင်းအတွက် တစ်ကြိမ် ရောနှောအသုံးပြုသည်။
CBD အသုံးပြုသူများ၊ ကားမောင်းခြင်းသည် အဆင်ပြေသည်- လေ့လာပါ။ (2022)
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း CBD သည်တစ်စုံတစ်ဦး၏မောင်းနှင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ ဒီလေ့လာမှုအသစ်က အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အဖြေတစ်ခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
နယ်စပ်၏တောင်ပိုင်း၊ ဆေးခြောက်သည်တရားဝင်ဖြစ်လာတော့မည်။ (2022)
အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကို မက္ကဆီကိုတွင် တရားဝင်ဖြစ်လာရန် ပြင်ဆင်နေပြီး US အောက်လွှတ်တော်မှ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရသည်။ ဒါက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
မျက်လုံးနီလား? သူတို့၏ပိုင်ရှင်သည် ညစ်ပတ်သောအပ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ (2022)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် opioid ကပ်ရောဂါသည် လူနာများအား ဆေးသုံးစွဲမှုအကြောင်း မေးမြန်းရန်၊ မျက်လုံးနီခြင်းနှင့် ရောင်နေသော မျက်လုံးများကို ကုသရန် ရှာဖွေရန် မျက်စိဆရာဝန်များကို လှုံ့ဆော်သင့်သည်။
ဒီဆေးတွေက FDA ရဲ့မျက်လုံးကို ဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲ။ (2022)
ဆီးချိုရောဂါရှိသူများနှင့် အက်ဆစ်ပြန်တက်ခြင်း- သင့်ရောဂါကို ကုသရုံမှတပါး သင့်ဆေးဝါးများ မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သိပါ။
Biden အုပ်ချုပ်ရေးတွင် Pot (မူဝါဒများ) နှင့်ဖြေရှင်းခြင်း။ (2022)
ဆေးခြောက်တရားမ၀င်သည် Biden အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပိုးသတ်ပြီးသည်နှင့် Pot Iscoming (Gasp!) ပင်မရေစီးကြောင်း (2022)
Cannabis သည် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း သူ့ကိုယ်သူ သက်သေပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
အချို့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ၎င်းတို့အတွက် သင့်တော်သောဆေးများ မသတ်မှတ်ပါ။ (2022)
ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဆေးဝါးများ ပိုမိုသောက်ရပေမည်။ ဒါပေမယ့် သင်ဘာသောက်နေလဲဆိုတာ သိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ALS ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုအသစ်သည် မိသားစုများအတွက် မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။ (2022)
ALS ၏တိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေရန် မကြာသေးမီကပြသခဲ့သော စမ်းသပ်ဆေးတစ်ခုသည် လူနာ၏အသက်ရှင်သန်မှုကို တာရှည်ခံစေမည့် အလားအလာရှိနိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှုပုံစံအသစ်သည် Opioid အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ (2022)
National Institutes of Health မှ opioid အသုံးပြုမှုရောဂါ (OUD) ကိုတိုက်ဖျက်ရန်အစပျိုးမှုအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
အချေအတင်ဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်း VP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ (2022)
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည် ဒုတိယသမ္မတလောင်းနှစ်ဦးသဘောမတူသည့် အကြောင်းအရာများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်ဆေးဆိုင် လိုအပ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်း3ခု (2022)
တစ်နေ့နေ့တွင် သင်သည် ဆေးစာဖြည့်စွက်ရန် ပေါင်းစပ်ဆေးဆိုင်တစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤဆေးဆိုင်များသည် သင့်ဒေသခံ Walgreens နှင့် ဆင်တူခြင်းမရှိပါ။ ဒီမှာ ဘာကြောင့်လဲ။
ယခုအခါ FDA သည် Benzodiazepines အတွက် "သေတ္တာသတိပေးချက်" တံဆိပ် လိုအပ်ပါသည်။ (2022)
FDA သည် benzodiazepine ဆေးများဖြစ်သည့် Ativan၊ Xanax၊ Klonopin၊ Librium နှင့် Valium ကဲ့သို့သော ဆေးစာများအတွက် "သေတ္တာသတိပေးချက်" တံဆိပ်ကို လိုအပ်နေပါသည်။
ဆေးဝါးဘေးကင်းရေး- သင့်ဆေးညွှန်းများကို နှစ်ဆစစ်ဆေးခြင်း။ (2022)
ဆေးစာတွေဖတ်တာက မှော်အစွမ်းတွေ မယူပါဘူး၊ သင်ဖတ်ဖို့ကြိုးစားရင် အဲဒီလိုထင်နိုင်ပေမယ့်၊
ဆရာဝန်များသည် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက် Oral Steroids ကို လွန်ကဲစွာ ညွှန်းနေနိုင်သည်။ (2022)
Steroids ၏တိုတောင်းသောသင်တန်းများသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရပန်းနာရင်ကျပ်လူနာများ၏ 25% ကျော်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော steroid tablets ပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားသည်။
ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကို စူးစမ်းလေ့လာနေသော သက်ကြီးရွယ်အိုများ (2022)
သက်ကြီးရွယ်အိုများအပါအဝင် အသက်အရွယ်အားလုံးတွင် ဆေးခြောက်ကို ဖြန့်ကျက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုရန် ပိုများသည်။
AstraZeneca ၏ ခေတ္တရပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုအပေါ် အပ်ဒိတ် (2022)
ထိပ်တန်းဆေးဝါးကုမ္ပဏီ AstraZeneca သည် transverse myelitis ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်း၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်မှုကို ခေတ္တရပ်ထားသည်။
TikTok တွင် Antihistamine-Taking Dare သည် သေစေပါသည်။ (2022)
အပန်းဖြေအသုံးပြုရန်အတွက် Benadryl သောက်နေသည့် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ အစီရင်ခံစာများသည် ဆရာဝန်များနှင့် မိဘများကို စိတ်ပူစေသည်။
လေ့လာမှု- Opioid Scripts များသည် ပြင်းထန်လွန်းပြီး စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ် (2022)
Pennsylvania တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများသည် 2015 မှ 2019 ခုနှစ်အတွင်း ဒူးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လူနာပေါင်း 100,000 နီးပါးကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုင်းခြေ- ပျမ်းမျှဆေးစာခွန်အားသည် မြင့်မားလွန်းသဖြင့် လူနာများကို အလွန်အကျွံသောက်ရန် အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။
Opioid အကျပ်အတည်းရှိသော်လည်း၊ ဆေးညွှန်းများစွာကို ထုတ်ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ (2022)
လူအများအပြားသည် ဆေးညွှန်း opioids စွဲလန်းလာသည်နှင့်အမျှ ပြစ်တင်ရှုတ်ချနေကြသော်လည်း အများအပြားကို ပမာဏများလွန်းပြီး ကြာရှည်စွာ ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
တစ်လုံးတည်းသော Toke သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများအတွက် အလွန်များသည်။ (2022)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီတုတ်ကိုမယူခင် နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားပါ။ သင့်ကလေးအား သင်ထင်သည်ထက် ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။
ကင်ဆာရောဂါမဟုတ်သော ဆေးဝါးများသည် ကင်ဆာဆဲလ်များကို သေစေနိုင်စွမ်းရှိသည်မှာ အံ့ဩစရာပင် (2022)
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင်သည့် ဆေးဝါးများ ရတနာသိုက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောဆေးဝါး Belviq သည် ကင်ဆာအန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်ဟု FDA က သတိပေးထားသည်။ (2022)
အဝလွန်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်သည့်ဆေး Belviq သည် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်နေနိုင်ကြောင်း FDA က သတိပေးထားသည်။
Kratom ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်များ (2022)
တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများက kratom သည် ထိရောက်သော နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။
Full Spectrum CBD၊ Broad Spectrum CBD နှင့် CBD Isolate- အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ (2022)
မှန်ကန်သော CBD ရေနံဖြေရှင်းချက်အတွက် စျေးဝယ်သည့်အခါ၊ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်များဖြင့် မတူညီသော ဝေါဟာရသုံးမျိုးနှင့် သင်တွေ့နိုင်သည်- ရောင်စဉ်အပြည့် CBD၊ ကျယ်ပြန့်သောရောင်စဉ် CBD နှင့် CBD သီးခြားခွဲထုတ်ထားသည်။ ဤအသုံးအနှုန်းတစ်ခုစီသည် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ နှင့် CBD ရေနံ၏အကျိုးကျေးဇူးအပြည့်အဝရရှိရန်သင်မည်သည့်အရာကိုအသုံးပြုသင့်သနည်း။
Penguin CBD ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း + ကူပွန်ကုဒ် (2022)
ဤသုံးသပ်ချက်တွင်၊ အဆီများ၊ ဆေးတောင့်များ၊ လိမ်းဆေးများနှင့် သွားဖုံးများကို ရောင်းချသည့် CBD စျေးကွက်တွင် မျက်နှာသစ်ဖြစ်သော Penguin CBD ကို ကြည့်ရှုပါသည်။
ကိုကင်းကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေဟာ အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းမှာ စိုးရိမ်စရာအဆင့်အထိ မြင့်တက်လာနေပါတယ်။ (2022)
အမေရိကန်တွင် ကိုကင်း၊ fentanyl နှင့် fentanyl ပေါင်းစပ်ထားသော ကိုကင်းကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေသည် ဆိုးရွားသော အမြင့်သို့ မြင့်တက်လာနေသည်။
အမေရိကန်များသည် CBD ကို ယခင်ကထက် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ (2022)
အမေရိကန်လူမျိုးများသည် CBD ၏နာကျင်မှုကိုသတ်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်လာသောကြောင့်အမေရိကန်ရှိ CBD လုပ်ငန်းသည် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
ဤဆေးသည် ဦးခေါင်းဒဏ်ရာရှိသူများ၏ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်သည် (2022)
အပျော့စားမှ အလယ်အလတ် TBI ကိုကုသရန်အတွက် TXA ဆေးကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသင့်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးခြောက်သည် USA တွင် အသုံးပြုမှု၏ ထက်ဝက်ဖြစ်သည်။ (2022)
ယခုအခါ အမေရိကန်လူမျိုး 10 ယောက်တွင်5ယောက်သည် ဆေးခြောက်ကို ၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်နှင့် မြင့်မားစေရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။
ဆေးခြောက်နှင့် ဉာဏ်ရည်တုများသည် သဘာဝမိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။ (2022)
AI ကို အသုံးချခြင်းသည် ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးသူများအား ၎င်းတို့၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် အမြတ်အစွန်းများ တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးခြောက်နှင့် ကြွက်သားကြီးထွားမှုအပေါ် သက်ရောက်မှု (2022)
Cannabis သည် ကြွက်သားထုထည်တည်ဆောက်ပေးသော Testosterone အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
Kratom: ဤရုက္ခဗေဒဆေးဖြင့် တကယ့်ပြဿနာ (2022)
Kratom သည် အမေရိကန်အစိုးရမှ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းခံရခါနီးတွင်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ဆေးလွန်ကဲမှုကြောင့် သေဆုံးမှုတွင် ကျဆင်းသွားစေရန် ချိတ်ဆက်ထားသော အလွန်အကျွံ-ပြောင်းပြန်ဆေးဝါး (2022)
Naloxone သည် U.S တွင် opioid ဆေးဝါးများ အလွန်အကျွံသောက်နေသူများ၏ အသက်ကို ဆက်လက် ကယ်တင်သည်။
US Cannabis စျေးကွက်သည် 2025 ခုနှစ်တွင် $41B အထိရောက်ရှိရန်စီစဉ်ထားသည်။ (2022)
အမေရိကန်ရှိ ဆေးခြောက်ဈေးကွက်သည် ကြီးမားသောတိုးတက်မှု လက္ခဏာများ ပြသနေသည်။